Xildhibaano shirar iska soo horjeeda ku qaadanaya Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaano shirar iska soo horjeeda ku qaadanaya Muqdisho
Xildhibaano shirar iska soo horjeeda ku qaadanaya Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online)- Magaalada Muqdisho ee Caasimada Somalia ayaa waxaa ka socda kullamo kala duwan oo u dhexeeya Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Somalia kuwaa oo ka arinsanaaya Xukuumada Cusub ee Somalia.
Kullamada oo ka socda Hoteelada Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kala wada Xildhibaano kasoo horjeeda Xukuumada iyo kuwa taabacsan, waxaana kulamada lagu abuurayaa go’aan lagu diidaayo Xukuumada cusub.
Xildhibaanada qaar ayaa kulamada ka dhex muujinaaya go’aano ah inaan la ansixin Xukuumada cusub bacdamaa Madaxweynaha Qaranka Maxamed C/llahi Farmaajo iyo Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre ay ballanka uga baxeen Xildhibaano ka shaqeeyay guushooda.
Xildhibaanada diidmada ka muujinaaya in la ansixiyo Golaha Wasiirada ayaa badi ka tirsan Xisbiga Daljir, waxa ayna xiligaani aad uga soo horjeedan Hanaanka lagu dhisay Golaha.
Xildhibaanada kale ayaa iyaguna muujinaaya inaan la hor istaagin Golaha Wasiirada isla markaana la meelmariyo, si ay usii wado howlaha qabyada u ah Dowlada Somalia Somalia.
Xildhibaanadaani oo badi xilal ka helay Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia ayaa ku doodaaya inay mudan tahay in la dardar galiyo howlaha Dowlada isla markaana aan la hor istaagin Xukuumada Somalia.
Dhinaca kale, waxaa leys weydinayaa in Golaha Wasiirada ay mari doonaan Xildhibaanada iyo inay la kumi doonaan Caqabado ku aadan meelmarintooda.